Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka The Common QuickTime Issues n
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwọta QuickTime video mkpọka, QuickTime dịghị ụda ma ọ bụ video, ma ọ bụ QuickTime video ndekọ nsogbu, wdg, dị na-agụ site isiokwu a na-esi gị azịza. N'ihi na QuickTime nkwụnye ins na uzo ozo, dị nnọọ pịa ebe a na-enweta ihe ọmụma.
1. Error Idozi: "Nke a nkiri na-achọ QuickTime, nke na-adịghị akwado site na nke a version nke iTunes".
Okpu-egwu QuickTime video na iTunes na ozi n'elu? Chọta ihe mere na ngwọta ebe a. Ihe Mere: iTunes 10.4 ma ọ bụ mgbe e mesịrị na OS X odum emepe ndabara na 64-bit mode, mgbe ụfọdụ ndị okenye media faịlụ nwere ike na-agba ọsọ na 32-bit mode. iTunes gāriọ QuickTime, n'ihi na QuickTime nanị na-agba na 32-bit mode. Ngwọta: nnọọ na-eso nzọụkwụ m. Mechie iTunes, pịa iTunes na akara ngosi na ngwa nchekwa na Finder, na mgbe ahụ Lelee nhọrọ, "Open na 32-bit mode" na iTunes.
2. QuickTime video ụda ma ọ bụ video
Iji dozie nsogbu gị, biko buru ụzọ mee ka n'aka na i nwere ndị ọhụrụ QuickTime ọkpụkpọ arụnyere, na gị video bụ dakọtara na QuickTime, QuckTime akwado Media Formats. Ahụ ga-esi ihe ngwọta n'okpuru.
QuickTime nkwụnye ins: Wụnye Perian, Flip4Mac, ma ọ bụ ndị ọzọ nkwụnye ins iji nweta ọzọ QuickTime codec ma ọ bụ usoro. Ọzọ nkọwa nke QuickTime nkwụnye ins.
QuickTime Ntụgharị: Jiri QuickTime tọghata iji tọghata vidiyo na-akwado site na QuickTime.
QuickTime ọkpụkpọ Alternative: Gbalịa a QuickTime ọkpụkpọ ọzọ, dị ka VLC, MPlayerX, ma ọ bụ ndị ọzọ.
Reinstall ma ọ bụ Downgrade QuickTime: reinstall ọhụrụ QT n'elu nke gara aga wụnye, ma ọ bụ nanị downgrade QuickTime ochie version, ebe ọ bụ na ọhụrụ ntọhapụ nke QT nwere ike ịbịa na chinchi ma ọ bụ na-akwado usoro na codec nsogbu.
3. QuickTime video araparawo Chrome / Firefox / Safari
Dozie QuickTime video okuku, ị ga-mkpa enyemaka nke media Player ma ọ bụ nkwụnye ihe nchọgharị ins. The QuickTime nkwụnye ins maka Chrome, Firefox ma ọ bụ Safari na-emekarị nyeere ndabara, ị nwere ike dị nnọọ na-arụsi ọrụ ya. Ma ọ bụ i nwere ike na-agbalị ụfọdụ media Player, dị ka VLC, ma ọ bụ Wondershare Player, nke dị maka egwu na-akpọ ọ bụla video.
QuickTime ọkpụkpọ maka iPad / iPhone / Android.
4. QuickTime ihuenyo ndekọ rapaara
QuickTime nwere ike ọkọdọ rapaara Mgbe ị rụchaa Ndekọ a video. Iji dozie nsogbu gị, ebe a na-2 eri i nwere ike na-atụgharị site Apple. Olee idozi QuickTime ihuenyo ndekọ rapaara Olee ebe a na ndị ahụ e dere QuickTime video echekwara
5. Ọ bụ n'ebe a 64 bit QuickTime maka Windows, ma ọ bụ QuickTime Player X maka Windows?
I. E nweghị 64 bit Windows OS version nke QuickTime. E nwere ihe dị nnọọ a 32-bit version nke QuickTime, ma ọ bụ dakọtara na 64-bit Vista na Windows 7.
Ka ibudata QuickTime N'ihi na Windows 8 (64 Bit), nweta ihe ọmụma ebe a.
II. QuickTime Player X bụ nanị maka Mac. N'ihi na Windows, ị nwere na ị nwere QuickTime Player (free) na QuickTime Pro.
Olee otú iji tọghata QuickTime MOV ka M4V
> Resource> QuickTime> Nchọpụta nsogbu Atụmatụ maka The Common QuickTime Issues